Fanta® स्पन्ज केक - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू | थर्मो रेसिपीहरू
खाजा27 मिनेट6 व्यक्ति
हो, तपाईं सहि पढ्नुहुन्छ, "केक Fanta®"। मैले यो नुस्खा इन्टरनेटमा फेला पारे र, सानो केटाको निद्राको फाइदा उठाउँदै, म काममा लागें। खाजाको लागि मैले यसलाई पहिले नै तयार गरिसकेको थिएँ यद्यपि यो लगभग आइपुगेको थिएन किनभने म प्रतिरोध गर्न सक्दिन र मैले यसलाई ओभनबाट ताजा प्रयास गरें।
यो एक केक हो जुन म सिफारिस गर्दछु किनभने यसको धेरै राम्रो स्वाद छ, केहि पनि छैन र बनावट शराबी छ र रसदार।
मैले व्यक्तिगत मोल्डमा गरेको छु, कप केक प्रकार, अलिकति फरक। तर पक्कै पनि यो मा गर्न सकिन्छ ठूलो साना स्पन्ज केक या त गोलाकार वा लामो प्रकारको प्लम केकको।
केही साथीहरूसँग कफी दिउँसोमा मैले उनीहरूका लागि केक राखें र उनीहरूलाई यो धेरै मन पर्यो। जब मैले तपाईलाई भने कि सामग्री मध्ये एक थियो सुन्तला Fanta®त्यो पल फोटो खिच्न नपाउँदा कस्तो बिडम्बना... उनिहरुले म माथी यस्तो अनुहार बनाए ! पत्याउनै सकेनन् ।
यसलाई प्रयास गर्नुहोस् र तपाईंले मलाई बताउनुहुनेछ!
1 Fanta® केक
सुन्तला Fanta® संग बनाइएको ... तपाईं हिम्मत गर्नुहुन्छ?
तयारी समय: 15M
125 ग्राम सुन्तला Fanta®
100 ग्राम सूर्यमुखी वा हल्का जैतूनको तेल
Aking ग्राम बेकि powder पाउडर (नुस्खा हेर्नुहोस्)
हामी पुतली ब्लेडमा राख्छौं, अण्डाहरूलाई गिलासमा राख्छौं, र चिनी, हामी प्रोग्राम गर्छौं २ मिनेट, तापक्रम १००º गति १।
अर्को, हामी अन्य पुन: कार्यक्रम २ मिनेट, गति,, कुनै तापमान छैन।
तेल र Fanta® थप्नुहोस्, मिश्रण गर्नुहोस् Seconds० सेकेन्ड, गति 15।
पीठो र खमीर थप्नुहोस्, कार्यक्रम Seconds० सेकेन्ड, गति 10।
यदि आवश्यक छ भने, हामी स्प्याटुलासँग मिश्रण गर्छौं।
हामी मोल्डहरू ग्रीस गर्छौं र तिनीहरूको क्षमताको दुई तिहाइ भर्छौं।
हामी 15 मिनेटको लागि समान तापमानमा बेक गर्छौं।
हामी ओभनबाट हटाउँछौं, यसलाई चिसो र अनमल्ड गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ यसलाई ठूलो मोल्डमा गर्नुहुन्छ भने तपाइँ यसलाई लामो समयको लागि ओवनमा छोड्नुपर्छ।
थप जानकारी - क्रीम कपकेक्स
स्रोत - "भान्सामा अन्न" को ब्लग
यो नुस्खालाई आफ्नो Thermomix®® मोडेलमा अनुकूल गर्नुहोस्
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Huevos, १ घण्टा भन्दा कम, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु, पेस्ट्री
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » Huevos » Fanta® केक
हो पक्कै पनि म यो प्रयास गर्न जाँदैछु !! ... हामी कसरी पहिले यो सोच्न सक्दैनौं! ??
अब लिनुहोस्! म तिम्रो अनुहार जस्तै साथीहरु पाउन सक्छु, hee।
यो प्रयास गर्नै पर्दछ।
चिकुनिनीलाई जवाफ दिनुहोस्
सद्गुणहरू मलाई एक शंका छ: यदि व्यक्तिगत मोल्डहरूमा यसलाई गर्नुको सट्टा हामीले यसलाई ठूलो स्पन्ज केकमा गर्‍यौं, समय अझै १ 15 मिनेट छ वा हामीसँग यो लामो हुनुपर्छ?
तपाइँको व्यंजनहरु मा बधाई छ!
नमस्ते क्रिस, म यसलाई लगभग minutes मिनेट जति छोड्न चाहान्छु, तर जस्तो म भन्छु, ओभनमा खाना पकाउने समय अनुमानित हुन्छ, किनकि यो हाम्रो चुलोमा निर्भर गर्दछ, त्यसैले म यसलाई सधैं केही अलि हेर्न खोलेँ, र गरें। एक सुई बिन्दुको साथ परीक्षण गर्नुहोस् (मसँग भएको स्टेनलेस स्टील स्कीवर स्टिक प्रयोग गर्छु) र यदि यो सफा बाहिर आयो भने त्यो हो।
सद्गुणहरू किनकि यो कत्ति धनी हुनु पर्छ ... यसमा फ्यान्टा राख्न यो मलाई कहिले हुने थिएन!
र तपाईं सुन्तला काल्पनिको सट्टा नारंगी कास राख्न सक्नुहुन्छ?
नमस्ते पाउला, सत्य यो हो कि मलाई के भन्नु पर्ने हो मलाई थाहा थिएन, मलाई थाहा छ कि कासमा बढी ग्यास छ, यो प्रयास गर्ने कुरा हुनेछ।
ठिकै छ, यस हप्तामा मैले यसलाई प्रयास गरेको छु र तपाईंलाई भन्छु कि हैन हे हेरौं। सादर
कत्तिको नवीन, यो निश्चित छ कि महान् छ, म अर्को एक को लागी विचार प्रतिलिपि गर्दछु। चुम्बनहरू
कर्मेलालाई जवाफ दिनुहोस्
कस्तो अनुग्रह, यो मलाई कहिले हुने थिएन! यो प्रयास गर्न आवश्यक हुन्छ यदि तपाई यो भन्न सक्नुहुन्छ कि यो राम्रो छ!
मलाई यो हास्यास्पद लाग्यो !! हाहाहा स्तब्ध पार्ने तर त्यहाँ यसलाई प्रयोग गर्न को लागी केहि छ, थर्मोमिक्स २१ मा हामी त्यसलाई पनि यस्तै गर्छौं ?? उत्तर xf
नमस्ते बियट्रीज, मैले अन्य अवसरहरूमा भनेझैँ, म tm21 मा रूपान्तरण गर्न एकदमै राम्रो छैन किनकि म tmx प्रयोग गर्दैछु थोरै समयको लागि। जसरी १ लाई तताउन समय लिन्छ, खाना पकाउने समयहरू एक मिनेटले कम गर्नुहोस्।
तपाइँ मलाई भन्नुहोस् यो कसरी भयो।
सद्गुणको जवाफ दिनुहोस्
mamen - नावलमोरल भन्यो
नमस्कार, म यो प्रयास गर्ने योजना गर्दैछु किनकि हाम्रो घरमा मीठो दाँत छ। म जहिले पनि यी चीजहरूबाट चिनी लिन्छु, तर यदि हामी कोका कोला राख्छौं भने? के हुनेछ?
मामेनलाई जवाफ दिनुहोस् - नावलमोरल
नमस्ते मेमेन, सत्य यो हो कि मलाई थाहा छैन यो कसरी कोकाकोलाको साथ बाहिर जान्छ, यो प्रयास गर्ने कुरा हुनेछ र यदि यो काम गर्दैन भने, त्यसो नगरी अब। यदि तपाईं कोका कोलाको साथ प्रयास गर्नुभयो भने, हामीलाई भन्नुहोस् कसरी ...
कोका कोलाको साथ, मलाई यो राम्रोसँग थाहा छैन, तर केक स्प SP्ग, टेन्डर र स्वादिष्ट छ। म सानो का लागी व्यक्तिगत बनाउँछु र उनीहरु लाई माया गर्छन्
नमस्ते Mamen, म खुशी छु, हामी पहिले नै अर्को संस्करण जान्दछौ, hahaha। फंताटाको साथ यो धेरै या त थाहा छैन, तर यसको एक सानो बिन्दु पनि छ, यो बाहिरी रूपमा कसरी बाहिर आउँदछ। एउटा सानो प्रश्न, कोकाकोला हुँदै, के यो अँध्यारो भयो कि केक हो?
नमस्कार सद्गुणहरू: यो अँध्यारोबाट बाहिर निस्किएन तर मैले यसलाई फेरि शानदार र महान कार्यहरू गरेकी हुँ र बच्चाहरूले यसलाई महान खाए
नमस्कार सद्गुण, आज मैले यो नुस्खा देखे र यसमा सामग्रीहरू समावेश गरेकोले मैले यसलाई बनाउने निर्णय गरें। तपाईंलाई भन्नुहोस् कि यो महान थियो। यति धेरै कि यो लगभग भोली पुग्न छैन। म यो सिफारिस गर्दछु। अभिवादन।
जोआक्वीलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते जोआकी, म साँच्चिकै खुसी छु। यो यो हो कि जब एक विधिमा केही असामान्य घटक समावेश हुन्छ यसले हामीलाई चकित पार्छ, तर यस अवस्थामा परिणाम आश्चर्यजनक हुन्छ ... मलाई खुशी छ कि तपाइँलाई यो मनपर्‍यो।
नमस्कार सद्गुण। मैले केक बनाएँ र यो बाहिर निस्केर आयो। केवल कुरा यो हो कि फन्टा राख्नुको सट्टा (जुन हामी घरमा मन पराउँदैनौं) मैले मर्काडोना सुन्तलाको रसको साथ गैर कार्बोनेटेड सोडा राख्छु, र यो शान्त र नरम थियो। मैले ठूलो स्पन्ज केकको लागि सिलिकॉन मोल्ड प्रयोग गरें र यसलाई पारिवारिक पुनर्मिलनमा लगियो र तपाईंलाई के भयो, जब मैले उनीहरूलाई सामग्रीहरू भने जुन उनीहरू चकित भए ... तर तिनीहरूले crumbs hehe heh हेरेनन् ... धन्यवाद र जस्तो म सधैँ भन्छु: साधारण सामग्रीहरूको साथ यी उत्कृष्ट सजीलो-व्यंजनहरू पठाउँदै गर्नुहोस्। ठूलो चुम्बन
नमस्कार स्यान्ड्रा, म परिवर्तन लेख्छु, घरमा कहिलेकाँही म त्यस किसिमको पेय पदार्थ पनि खर्च गर्दछु। मलाई खुशी छ कि तपाईले यो धेरै मन पराउनुभयो। र तपाइँको प्रोत्साहन को लागी धन्यवाद। एक राम्रो चुम्बन।
मैले लिम्बू फ्यान्टाको साथ केक बनाएँ र यो कत्ति धनी र फ्लफ बाहिर आउँछ आश्चर्यजनक छ।
नुस्खा को लागी धन्यवाद।
मैले एप्पल ट्राइरानजसको साथ केक बनाएँ र यो शानदार, धेरै शराबी र फ्यान्टा जत्तिकै धनी थियो। हामीलाई यस्तो चाखलाग्दो व्यंजनहरु पठाउन धन्यबाद।
मारीबेललाई जवाफ दिनुहोस्
एप्पल ट्रिनिरजस, के राम्रो विचार हो… म यसलाई लेख्छु ... 😉
नमस्ते सद्गुणहरु! कस्तो राम्रो देखिन्छ! एक शंका, पुतली तपाइँ यसलाई सबै समय छोड्नुहुन्छ?
नार्सीलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते केटीहरू म दिनभरि यो गर्नेछु तर… .. म पुतली पाउन सक्दैन, के यो आवश्यक छ? धन्यबाद
नमस्ते फेरे, हामी पुतलीलाई घुमाउन र पिठोमा शरीर दिन्छौं, मलाई थाहा छैन यो बिना कसरी बाहिर आउनेछ ...
रोजालिया गोमेज भन्यो
गुणहरू, मैले तपाईंको नुस्खा हेरेको छु र मलाई यो रोचक लाग्यो, तर म तपाईंलाई बताउन माफी चाहन्छु कि जर्मनहरूमा बच्चाहरूको जन्मदिनमा लामो समयसम्म त्यो फ्यान्टा केक तयार गर्ने बानी छ। डिजाइन परिवर्तन गर्नुहोस्, हो, तपाईंले पानी र चिनीको मिश्रणको केही स्ट्रोकहरू मात्र ब्रस गर्नुपर्छ (यसलाई राम्रोसँग मिलाउनको लागि तताउनु पर्छ), मलाई खुराक सम्झना छैन, केवल एक तह बनाउन पर्याप्त छ। केक र त्यसमा राख्नुहोस्, सबै रंगीन ल्याकासिटोमा छोप्नुहोस् र बच्चाहरूको लागि सानो भागमा काट्नुहोस्। म तिमीलाई भन्छु कि तपाई साना बच्चाहरु संग "जसरी हुन्छ" सफल हुन्छ। म तपाईलाई भन्न बिर्सन्छु कि तिनीहरूले यो धेरै उच्च गर्दैनन् किनभने यस तरिकाले बच्चाहरूले यसलाई राम्रोसँग खान्छन्, यो सुन्दर देखिन्छ, मलाई माफ गर्नुहोस् मसँग तपाईलाई पठाउनको लागि फोटोहरू छैनन्।
रोजाला गोमेजलाई जवाफ दिनुहोस्
हेलो रोजाला, मलाई तपाईले यस केकको प्रस्तुतीकरणको बारेमा बताउनु भएको तरिकाले म मन पराउँछु। जसको मैले टिप्पणी गरेन। र हो, म कल्पना गर्दछु कि कतिवटा रेसिपीहरूमा हामी सामान्य स्पेनिश भोजनहरू लिइरहेका छौं, किनकि यो आयात हुन्छ ...
मैले आज दिउँसो गरे र आश्चर्यजनक भयो !! यो धेरै रमाईलो छ, रमाइलो छ, मैले यसलाई गोडिवा चकलेट यम यमले कभर गरेको छु !! १० मिनेट urff मा आधा केक मामला! नुस्खा को लागी धन्यवाद !!
तपाइँले जे भन्नुहुन्छ त्यसबाट तपाई असाधारण हुनुहुन्छ। चकलेट को विचारमा पनि बधाई छ। तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद !.